Diego Costa oo ay ka soo booday nolosha Ingiriiska – Gool FM
Diego Costa oo ay ka soo booday nolosha Ingiriiska
Byare January 15, 2017
(London) 15 Jan 2017. Dhaliyaha Chelsea Diego Costa ayaa la warinayaa inuu nacay nolosha Ingiriiska isla markaana uu ku adkeysanayo inuu isaga tago Chelsea si uu uga tago horyaalka Premier League sida ay warineyso jariiradda afka dheer ee The Sun.
28-jirka ayaa lagu soo darin shaxdii xalay ee Blues kuwaa oo 3-gool ugu adkaaday Leicester City, laakiin tababare Conte ayaa sheegay inuu sababo dhaawac ku maqnaa weeraryahanka reer Spain iyadoo ay jiraan warar la xiriirinaya horyaalka Shiinaha.
Naadiga Tianjin Quanjian ayaa la warinayaa inay dooneyso inay adduun dhan 80-milyan kula soo wareegto xiddiga asal ahaanta ka soo jeeda Brazil, laakiin inkastoo ay jirto inuu Costa doonayo inuu tago misane Chelsea ayaan dooneyn inay iska iibiso dhaliyaheeda ugu sarreeya ilaa dhammaaadka kal ciyaareedkan.
Yeelkeede, Costa ayaa la sheegayaa inuu saaxiibadiisa u sheegay inay ka soo booday nolosha Ingiriiska isla markaana uu doonayo inuu isaga tago, waxaa xitaa la warinayaa in mabda’ ahaan uu heshiis shaqsi ahaaneed la gaaray kooxda ka dhisan Shiinaha.
SERIE A: Internazionale oo guul soo laabasho ah ka gaartay ChievoVerona… + SAWIRRO
Jose Mourinho oo doonaya inuu dib ula midoobo Matic